Rifletti, oggi, sulla tua esperienza di scoperta del Regno di Dio | Io amo Gesù
Chegharia taa na ahụmihe i na-achọta ala eze Chineke
di Paolo Tescione - Julaị 26, 2020
"Alaeze eluigwe dị ka akụ nke e liri n'ubi, nke mmadụ hụrụ wee zoo ọzọ, maka ọ joyụ ọ na-aga ire ihe niile o nwere wee zụta ala ahụ." Matiu 13:44
Ndia bu ihe ato ichoro maka ebe a: 1) Ala eze Chineke di ka “akụ”; 2) O zoro ezo, na-eche ka a chọta ya; 3) Ozugbo achọpụtara, ọ bara uru ịhapụ ihe niile achọrọ iji nweta ya.
Nke mbụ, ịtụgharị uche n’otú Alaeze Chineke dị dị ka akụ̀ bara uru. Ihe oyiyi nke akụ nwere ọtụtụ ihe mmụta. A na-ewere akụ dị ka akụ bara ụba iji mee ka ọ baa ọgaranya ma ọ bụrụ na achọta ya. Ọ bụrụ na ọdịghị uru dị otu ahụ, a gaghị ewere ya dị ka akụ. N’ihi ya, ihe mbụ anyị kwesịrị ịmụta bụ na Alaeze Chineke dị ezigbo mkpa. N'ezie, ọ nwere uru na-enweghị ngwụcha. Ma otutu mmadu huru ya dika ihe na-adighi nma ma họrọ otutu "ihe ozo" ozo.
Nke abuo, o zoro ezo. Ezobeghi ya n’uche na Chineke achọghị ka anyị chọpụta; kama, ezoro ya n'echiche nke na Chineke achọghị ka anyị chọpụta ya. Ọ na-eche anyị, na-eche ka a chọpụta ya ma nwee obi ụtọ mgbe achọtara ya. Nka gegosiputa oke obi uto madu n’eme nchoputa nke ala eze Chineke n’etiti ayi.
Nke ato, mgbe mmadu choputara uba nke ala eze Chineke na nke ndu amara, ihe omuma a kwesiri ibu ihe di egwu nke na o nweghi obere oge ichoro ịhapụ ihe nile iji nweta ihe achotara. Lee ọ joyụ dị na ịbịa mara ndụ nke amara na ebere! Ọ bụ nchọpụta ga-agbanwe ndụ mmadụ ma dugara ịhapụ ihe ọ bụla na-achọ akụ ọhụrụ ahụ achọpụtara.
Tugharịa uche taa n’ahụmahụ gị n’ịchọta Alaeze Chineke. Ọ bụrụ otu a, ị kwekwara ka ịchọpụta ndụ amara a dọta gị nke ukwuu nke na ị dị njikere ma dị njikere ịhapụ ihe niile iji nweta ya? Tinye anya gi n’onyinye a nke enweghi oke ngwụcha ma kwe ka Onye-nwe-ayi duzie gi n’achọ ya.
Onyenweanyị, ahụrụ m gị n’anya ma kelee gị maka akụ oke-ọnụ-ahia nke I doziri m. Nyere m aka ime nchọpụta a zoro ezo kwa ụbọchị n'ụzọ zuru ezu ma na-akpali akpali. Mgbe m chọtara akụ a, nye m obi ike m ga-eji hapụ ihe niile ọzọ m na-eme ná ndụ ka m nwee ike chọọ otu onyinye a. Jesus ekwere m na gị.